Filimka Raees Iyo Lacagaha Uu Suuqyada Caalamka Iyo Isku Darka Gudaha Hindiya Kasoo Xareeyay Ilaa Haatan - Hablaha Media Network
Filimka Raees Iyo Lacagaha Uu Suuqyada Caalamka Iyo Isku Darka Gudaha Hindiya Kasoo Xareeyay Ilaa Haatan
HMN:-Shabakada Boxoffice India ayaa si rasmi ah usoo daabacday maqaal ay kaga hadleyso filimka Raees lacagaha uu suuqyada caalamka kasoo xareeyay iyo isku darka gudaha iyo daafaha caalamka heerka uu maraayo filimkaan SRK hogaamiye ka yahay.
Raees wuxuu daafaha caalamka kasoo xareeyay $12.25 million mudo 12-cisho ah wuxuuna sameeyay hoos u dhac todobaadkiisa labaad marka uu guda galay.
Raees si wacan ayuu kaga furmay dalka Jarmalka wuxuuna ka keenay $135,000 sidoo kalena Singapore ganacsi lixaad leh ayuu ka sameeyay asigoo halkaas kasoo xareeyay $400,000.
Ilaa haatan Raees wuxuu sameeyay ganacsi la mid ah filimkii Ae Dil Hai Mushkil oo la daawaday xiligii Diwali 2016 balse ADHM wuxuu ahaa filim saaxiib la ah suuqyada caalamka madaama fariintiisa jaceyl, shactiro iyo heeso wacan xambaarsaneyd.
Raees lagama daawan doono gudaha Pakistan madaama halkaas laga mamnuucay wuxuuna weyn doonaa $1 million oo dalka Pakistan kasoo gali laheyd ugu yaraan.
Ilaa haatan suuqyada caalamka ganacsiga uu Raees ka sameeyay fadlan hoos kaga bogo: